Amaphuzu abucayi kakhulu futhi asengozini yokuguquka kwesimo sezulu eYurophu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba ngishilo kaningi, Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta cishe wonke amagumbi eplanethi. Kwezinye izindawo ezisengozini kakhulu, kusobala ukuthi ibathinta kakhulu futhi kwezinye ibahlasele kancane. Kepha eYurophu, imiphumela emibi kakhulu evelele ithinta futhi isazoqhubeka nokuthinta izifunda eziseningizimu naseningizimu-mpumalanga.
Izindawo ezithinteke kakhulu yizindawo zaseMedithera nezasogwini. Kule ndatshana ekhuluma nge-Arctic siyabona ukuthi yini imiphumela esondele kakhulu yokuncibilika okubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu. Njengoba sibona, izwe lethu linjalo phakathi kwabokuqala ukulinyazwa yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
1 Umbiko we-Europe 2016 wokuThuthukiswa kwesimo sezulu, imithelela kanye nombiko wokuba sengozini
2 Imithelela eplanethi
3 Izindawo ezidla lubi ekushintsheni kwesimo sezulu
4 Ukuguquka kwesimo sezulu empilweni yabantu nakwezomnotho
Umbiko we-Europe 2016 wokuThuthukiswa kwesimo sezulu, imithelela kanye nombiko wokuba sengozini
Umbiko wethulwe ngoJanuwari 25 ngu i-European Environment Agency (i-EEA). Lo mbhalo ungamakhasi angama-420 ubude futhi ufingqa imininingwane evela ezifundweni ezingamakhulu ezenziwe eminyakeni edlule. Lezi zifundo zisuselwe kwimiphumela ukushintsha kwesimo sezulu okuba nayo futhi okuzoba nayo kulo lonke elaseYurophu.
Imicimbi eyeqisayo njengamagagasi okushisa, imvula enamandla, nesomiso zizovela kaningi nangaphezulu. Ngaphezu kwalokho, cishe zonke izibikezelo zekusasa eliseduze laseYurophu azinathemba uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa emkhathini kungenakuncishiswa ngokushesha.
Yize kunciphisa amagesi abamba ukushisa, imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ngeke iyeke, ngeke nje yande. Kodwa-ke, imiphumela esiyibonayo isazoqhubeka nokushintsha imvelo esiyaziyo. Izinguquko eziboniwe kwesimo sezulu sezivele zinomthelela omkhulu ezinhlelweni zezinto eziphilayo, emnothweni nasempilweni yabantu nasenhlalakahleni eYurophu.
Ngaphandle kwemizamo eyenziwayo, noma ngabe iSivumelwano saseParis senziwe, kuyaqoshwa amazinga okushisa aphezulu ngonyaka, ukuphakama kwezinga lolwandle kuyaqhubeka nokukhuphuka neqhwa lase-Arctic liyaqhubeka nokuhlehla ngokushesha unyaka nonyaka. Ngaphezu kwalokho, imvula minyaka yonke iyashintsha, nezindawo zaseYurophu ziba nomswakama kakhulu futhi ezomile zome kakhulu.
Ezingeni lomhlaba jikelele, umthamo wezinguzunga zeqhwa nezinga lazo ziyancipha, nemiphumela emibi esiyibonile kusixhumanisi esedlule. Ngasikhathi sinye, izehlakalo ezihlobene kakhulu nesimo sezulu ezinjengamaza okushisa, imvula enkulu, nesomiso, zenzeka ngokuvama nokuqina okukhulu ezindaweni eziningi. Ukuqagela kwesimo sezulu okwenziwe ngcono kunikeza ubufakazi obengeziwe bokuthi izehlakalo ezimbi ezihlobene nesimo sezulu zizokwanda ezifundeni eziningi zase-Europe.
Izindawo ezidla lubi ekushintsheni kwesimo sezulu
Njengoba ngike ngabeka imibono ngaphambilini, zonke izifunda zeplanethi zisengozini yokuguquguquka kwesimo sezuluYize kuliqiniso ukuthi abanye babo bazothola imiphumela emibi kakhulu kunabanye. ENingizimu naseningizimu-mpumalanga yeYurophu kuzoba yizindawo okushiswa kuzo isimo sezulu. Imithelela emibi eminingi kulindeleke ukuthi yenzeke kulezi zingxenye zase-Europe.
Lezi zifunda sezivele zathola ukwanda okuphawulekayo emazingeni okushisa aphezulu kanye nokwehla okulandelayo kwemvula nokugeleza kwemifula, okubuye kusho ingozi eyengeziwe yesomiso esibi kakhulu, ukulahleka kwesivuno sesivuno, ukulahleka ukuhlukahluka kwemvelo kanye nokwanda kwemililo yehlathi.
Amagagasi amaningi okushisa avamile kanye nezinguquko ekusatshalalisweni kwezifo ezithathelwanayo ezizwela ekuguqukeni kwesimo sezulu kulindeleke ukuthi zihumushe ukwanda kwezingozi empilweni nasenhlalakahleni yabantu.
Ukuguquka kwesimo sezulu empilweni yabantu nakwezomnotho
Ngaphezu kwakho konke, izindawo ezisogwini kanye nezikhukhula zasentshonalanga yeYurophu zithathwa njengezindawo ezibucayi ngoba zisengozini enkulu yezikhukhula ezitholakala ekukhuphukeni kolwandle. Izinguquko kumjikelezo wezinhlobo, ukufudukelwa kwazo ziye kwezinye izindawo, njll. Ziyathinta kabi emisebenzini ehlukahlukene yezemvelo nasemikhakheni yezomnotho efana nezolimo, amahlathi kanye nezokudoba.
Ngokushintsha kwesimo sezulu, kuzokwanda ukusabalala kwezifo eduze ne-Ecuador. Imiphumela yayo yezempilo ifaka phakathi ukulimala, ukutheleleka, ukuvezwa izingozi zamakhemikhali, kanye nemiphumela yezempilo yengqondo. Amagagasi okushisa asevame kakhulu futhi ashuba kakhulu, abangela ukufa kwamashumi ezinkulungwane ngaphambi kwesikhathi eYurophu. Lo mkhuba kulindeleke ukuthi ukhule futhi uqinise, ngaphandle kokuthi kuthathwe izinyathelo ezifanele zokuzivumelanisa nezimo.
Ukusabalala kwezinhlobo ezithile zemikhaza, umiyane we-tiger wase-Asia, nezinye izifo ezithwala izifo kwandisa ingozi yokungenwa yisifo i-Lyme, i-encephalitis ethwalwa imikhaza, ukutheleleka ngegciwane le-West Nile, umkhuhlane wodenga, umkhuhlane weChikungunya, kanye umagazine.
Njengoba sibona, singelinye lamazwe asengozini enkulu ekushintsheni kwesimo sezulu futhi ngiyethemba ukuthi kukhona okuzokwenziwa ukunqanda imiphumela yalo emibi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amaphuzu abucayi kakhulu futhi asengozini yokuguquka kwesimo sezulu eYurophu